Donnie Darko (2001) | MM Movie Store
ဒီကားကို Master Pieceကားတဈကားလို့ဆိုကွပါတယျ။Personalအရပွောရမယျဆိုရငျ Predestination.. Memento..Prestige..InceptionShutter Island အစရှိသဖွငျ့ကားတှကေတောငျ ဒီကားရဲ့ လေးပုံတဈပုံလောကျ ကြှနျတေျာ့ကိုခေါငျးမစားစပေါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Legend ActorကွီးJake Gyllanhaalနဲ့သူ့အမ Maggie Gyllanhaalတို့ကိုလညျးဒီရုပျရှငျမှာ မောငျနှမတှအေဖွဈတှရေ့မှာပါ။ဒီရုပျရှငျမှာ …4th Dimension ဝါ အပွိုငျစကွဝဋ်ဌာအခြိနျခရီးသှားခွငျးသီအိုရီတှေ…ကမ်ဘာပကျြကိနျးတဈခု.
အိပျမကျယောငျလမျးလြှောကျတတျတဲ့ရောဂါ ဖောကျထှကျတတျတဲ့အတှေးအချေါရှိတဲ့လူငယျလေးတဈယောကျနဲ့ ဆရာမတဈယောကျအဓိပ်ပါယျမရှိတဲ့တကျကမျြးတှနေဲ့အောငျမွငျနတေဲ့လူတဈယောကျဘဝအပျေါမတူညီတဲ့အမွငျတှေ ကံတရားရဲ့ မယုံနိုငျလောကျစရာတှစေိတျကုထုံးဆှေးနှေးမှုတှတှေအေပွငျ တခွားအကွောငျးအရာပေါငျးစုံကို ၂နာရီမခှဲတဲ့အခြိနျကလေးမှာ အကုနျလုံးထညျ့သှားပါတယျ။
တဈကားလုံးအပွီးမှာ ခငျဗြားမှာ မေးခှနျးတှေ သိပျမြားသှားမှာသခြောပါတယျ။ အဖွရှေိမရှိကတော့ ကိုယျ့အပျေါပဲ မူတညျပါတယျ။ဒီကားထဲက အခြိနျခရီးသှားခွငျးနဲ့ပကျသကျတာတှဟောစိတျကူးယဉျတာတှမေဟုတျပဲ တကယျ့ သီအိုရီတှဖွေဈပါတယျ။
အကယျြသိလိုက Stephan Hawkingရဲ့ A Brief History of TimeမွနျမာပွနျPDFမှာ ဖတျရှုလို့ရပါတယျ။4th Dimension ဝါ..အပွိုငျစကွဝဋ်ဌာအကွောငျးတော့ကြှနျတျောဖတျမှတျ နားလညျထားသလောကျရှငျးပွခငျြပါတယျ။
Donnie Darko ( Spoiler Alert)အရငျဆုံးအနနေဲ့ ကြှနျတျောရှငျးပွခငျြတာကTangent Universe(Parallel Universe)နဲ့Primary Universe ပါ။Tangent Universeကို ကြှနျတျောတို့ Fourth Dimensionလို့ချေါပါသေးတယျ။ Primary Universeကိုတော့Third Dimensionsလို့ သိကွပါတယျ။
4D ကို ဥပမာတဈခုပေးရရငျရခေဲတုံးတဈတုံးကို ကြှနျတျောတို့ မွငျနိုငျပါတယျ။ဒါ လကျရှိလောကရဲ့ 3D အမွငျပါ။သို့ပမေဲ့ရခေဲတုံးရဲ့ အခြိနျကာလတဈခုအလှနျမှာအရညျပြျောသှားမဲ့ ပုံစံကို ကြှနျတျောတို့ စိတျကသိပွီးသားပါ။ ဒါကို ရခေဲတုံးရဲ့ 4D လို့ချေါပါမယျ။ရှငျးလငျးသိသာသှားအောငျဆို ဥပမာတဈခုထပျပေးခငျြပါတယျ။ယဘေုယြဥပမာပါပဲ။
သဘောတရားနားလညျရုံပါ။ကြှနျတျောတို့ မကျြစိနဲ့ မွငျမွငျနသေမြှ3Dimensionsကမလှတျမွောကျသှားပါဘူး။ ဥပမာဆို..စားပှဲပျေါတငျထားတဲ့ရဘေူးတဈဘူးကို ကွညျ့လိုကျပါ။ အရှဘေ့ကျနဲ့ ဘေးနှဈဖကျကိုကောငျးကောငျးမွငျရမှာပမေဲ့ နောကျကြောဘကျရှိနပေမေဲ့ကြှနျတျောတို့ မမွငျနိုငျပါဘူး။
မွငျခငျြတယျဆိုရငျတော့အခုကွညျ့နတေဲ့နရောကနေ အခြိနျနဲ့နရောတဈခြို့ကိုဖွတျပွီးကြောဘကျခွမျးက ပွနျကွညျ့တဲ့အခါ မွငျနိုငျပါမယျ။ဒီဥပမာက 4Dဟာ အခြိနျနဲ့နရောရဲ့ သကျရောကျမှုဝါ အခြိနျနဲ့နရောကွောငျ့ဖွဈလာတာကို ရှငျးပွရုံသကျသကျပါပဲ။.
ပွောရရငျ အခြိနျဆိုတာ 4th Dimensionပါပဲဒီတော့ ဆိုလိုတာက ကြှနျတျောတိျု့ လကျရှိအဖွဈအပကျြတှတေညျရှိမှုတှရေဲ့ Parallelမှာ 4D ကမ်ဘာတဈခုရှိနပေါတယျ။parallel universe or Tangent Universr or4D ကမ်ဘာတဈခုဟာ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ဖွဈပကျြခြိနျအရငျနဲ့နောကျပွီး အခြိနျဘယျရှဘေ့ယျမြှကှာမယျတိတိပပ ပွောမရပမေဲ့ ရှိနပေါတယျ။
ဒီလောကျဆို 4th Dimensionကို ရှငျးလောကျပါပွီ။ကနျြတာတှကေို ဆကျရှငျးပွခငျြပမေဲ့ Spoilerဖွဈမှာစိုးတာမို့ မရှငျးတော့ပါဘူး။ဇာတျကွောငျးအကဉျြးကတော့အထကျတနျးကြောငျးသားကောငျလေးတဈယောကျဟာအိပျမကျယောငျရငျးလမျးလြှောကျရာကပွနျလာတဲ့အခါသူ့အခနျး သူ့ကုတငျတညျ့တညျ့ကို ပွုတျကလြာတဲ့ဂကျြအငျဂငျြကွီးအတှကျ လူတှစေုဝေးနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။
သူသာ အိပျမကျယောငျပွီးလမျးလြှောကျမနရေငျ သူသမှောပါ။သူ့ကို ဒီအဖွဈကကယျတငျပေးလိုကျတယျလို့ ယူဆရတာကတော့၆ပရှေိတဲ့ ယုနျဝတျစုံ ယုနျခေါငျးစှပျကွီးနဲ့ တဈစုံတဈရာပါအဲ့ဒီဝတျစုံထဲက တဈစုံတဈရာက သူ့ကိုကမ်ဘာကွီးအဆုံးသတျတော့မဲ့ အခြိနျကို ပွောပွသှားပါတယျ။
ယုနျခေါငျးစှပျထဲကရော ဘယျသူလဲကမ်ဘာကွီးကရော တကယျအဆုံးသတျမှာလား.အခြိနျခရီးသှားတာကရော ဖွဈနိုငျမှာလား အစရှိသဖွငျ့..လားပေါငျးမြားစှာကို တှရေ့မှာပါ။
ဘဝဆိုတာ အိပျမကျတဈခုပါပဲတဲ့.ဒါဆို အိပျမကျကရော ဘဝတဈခု ဖွဈခဲ့မလား…အကွောငျးတရားတှဟော နဂါးခေါငျးဘယျဘကျလှညျ့မလဲမသိရသလို အဆိုးအကောငျးတှေ မရမေရာဒှနျတှဲနပေါတယျ။လူတိုငျးဘဝမှာ ထငျမှတျမထားတဲ့ အံ့သွဆနျးကွယျ ဖွဈရပျတဈခုကို တဈကွိမျတဈခါတော့ ကွုံကွိုကျရမှာပါ။
ဒီအဖွဈအပကျြကတော့ မွောကျမြားလှစှာသော ဘဝတှထေဲကဘဝတဈခုပျေါပွုတျကခြဲ့တဲ့ အံ့သွစရာဖွဈရပျတဈခုပါပဲ။
ဒီကားကို Master Pieceကားတစ်ကားလို့ဆိုကြပါတယ်။Personalအရပြောရမယ်ဆိုရင် Predestination.. Memento..Prestige..InceptionShutter Island အစရှိသဖြင့်ကားတွေကတောင် ဒီကားရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက် ကျွန်တော့်ကိုခေါင်းမစားစေပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Legend ActorကြီးJake Gyllanhaalနဲ့သူ့အမ Maggie Gyllanhaalတို့ကိုလည်းဒီရုပ်ရှင်မှာ မောင်နှမတွေအဖြစ်တွေ့ရမှာပါ။ဒီရုပ်ရှင်မှာ …4th Dimension ဝါ အပြိုင်စကြဝဋ္ဌာအချိန်ခရီးသွားခြင်းသီအိုရီတွေ…ကမ္ဘာပျက်ကိန်းတစ်ခု.
အိပ်မက်ယောင်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ရောဂါ ဖောက်ထွက်တတ်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့တက်ကျမ်းတွေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဘဝအပေါ်မတူညီတဲ့အမြင်တွေ ကံတရားရဲ့ မယုံနိုင်လောက်စရာတွေစိတ်ကုထုံးဆွေးနွေးမှုတွေတွေအပြင် တခြားအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို ၂နာရီမခွဲတဲ့အချိန်ကလေးမှာ အကုန်လုံးထည့်သွားပါတယ်။
တစ်ကားလုံးအပြီးမှာ ခင်ဗျားမှာ မေးခွန်းတွေ သိပ်များသွားမှာသေချာပါတယ်။ အဖြေရှိမရှိကတော့ ကိုယ့်အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ဒီကားထဲက အချိန်ခရီးသွားခြင်းနဲ့ပက်သက်တာတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်တာတွေမဟုတ်ပဲ တကယ့် သီအိုရီတွေဖြစ်ပါတယ်။
အကျယ်သိလိုက Stephan Hawkingရဲ့ A Brief History of Timeမြန်မာပြန်PDFမှာ ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။4th Dimension ဝါ..အပြိုင်စကြဝဋ္ဌာအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဖတ်မှတ် နားလည်ထားသလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
Donnie Darko ( Spoiler Alert)အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကTangent Universe(Parallel Universe)နဲ့Primary Universe ပါ။Tangent Universeကို ကျွန်တော်တို့ Fourth Dimensionလို့ခေါ်ပါသေးတယ်။ Primary Universeကိုတော့Third Dimensionsလို့ သိကြပါတယ်။
4D ကို ဥပမာတစ်ခုပေးရရင်ရေခဲတုံးတစ်တုံးကို ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါ လက်ရှိလောကရဲ့ 3D အမြင်ပါ။သို့ပေမဲ့ရေခဲတုံးရဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုအလွန်မှာအရည်ပျော်သွားမဲ့ ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကသိပြီးသားပါ။ ဒါကို ရေခဲတုံးရဲ့ 4D လို့ခေါ်ပါမယ်။ရှင်းလင်းသိသာသွားအောင်ဆို ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးချင်ပါတယ်။ယေဘုယျဥပမာပါပဲ။
သဘောတရားနားလည်ရုံပါ။ကျွန်တော်တို့ မျက်စိနဲ့ မြင်မြင်နေသမျှ3Dimensionsကမလွတ်မြောက်သွားပါဘူး။ ဥပမာဆို..စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ရေဘူးတစ်ဘူးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အရှေ့ဘက်နဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရမှာပေမဲ့ နောက်ကျောဘက်ရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။
မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကြည့်နေတဲ့နေရာကနေ အချိန်နဲ့နေရာတစ်ချို့ကိုဖြတ်ပြီးကျောဘက်ခြမ်းက ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ မြင်နိုင်ပါမယ်။ဒီဥပမာက 4Dဟာ အချိန်နဲ့နေရာရဲ့ သက်ရောက်မှုဝါ အချိန်နဲ့နေရာကြောင့်ဖြစ်လာတာကို ရှင်းပြရုံသက်သက်ပါပဲ။.
ပြောရရင် အချိန်ဆိုတာ 4th Dimensionပါပဲဒီတော့ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့် လက်ရှိအဖြစ်အပျက်တွေတည်ရှိမှုတွေရဲ့ Parallelမှာ 4D ကမ္ဘာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။parallel universe or Tangent Universr or4D ကမ္ဘာတစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဖြစ်ပျက်ချိန်အရင်နဲ့နောက်ပြီး အချိန်ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကွာမယ်တိတိပပ ပြောမရပေမဲ့ ရှိနေပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို 4th Dimensionကို ရှင်းလောက်ပါပြီ။ကျန်တာတွေကို ဆက်ရှင်းပြချင်ပေမဲ့ Spoilerဖြစ်မှာစိုးတာမို့ မရှင်းတော့ပါဘူး။ဇာတ်ကြောင်းအကျဉ်းကတော့အထက်တန်းကျောင်းသားကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာအိပ်မက်ယောင်ရင်းလမ်းလျှောက်ရာကပြန်လာတဲ့အခါသူ့အခန်း သူ့ကုတင်တည့်တည့်ကို ပြုတ်ကျလာတဲ့ဂျက်အင်ဂျင်ကြီးအတွက် လူတွေစုဝေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သူသာ အိပ်မက်ယောင်ပြီးလမ်းလျှောက်မနေရင် သူသေမှာပါ။သူ့ကို ဒီအဖြစ်ကကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ ယူဆရတာကတော့၆ပေရှိတဲ့ ယုန်ဝတ်စုံ ယုန်ခေါင်းစွပ်ကြီးနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာပါအဲ့ဒီဝတ်စုံထဲက တစ်စုံတစ်ရာက သူ့ကိုကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်တော့မဲ့ အချိန်ကို ပြောပြသွားပါတယ်။
ယုန်ခေါင်းစွပ်ထဲကရော ဘယ်သူလဲကမ္ဘာကြီးကရော တကယ်အဆုံးသတ်မှာလား.အချိန်ခရီးသွားတာကရော ဖြစ်နိုင်မှာလား အစရှိသဖြင့်..လားပေါင်းများစွာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဘဝဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲတဲ့.ဒါဆို အိပ်မက်ကရော ဘဝတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့မလား…အကြောင်းတရားတွေဟာ နဂါးခေါင်းဘယ်ဘက်လှည့်မလဲမသိရသလို အဆိုးအကောင်းတွေ မရေမရာဒွန်တွဲနေပါတယ်။လူတိုင်းဘဝမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အံ့သြဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ကြုံကြိုက်ရမှာပါ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ မြောက်များလှစွာသော ဘဝတွေထဲကဘဝတစ်ခုပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ အံ့သြစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။